Soo degso Waqooyiga Ameerika Rockwell OV-10D USMC & CAP FSX & P3D - Rikoooo
downloads 6 947
Qaabka asalka ah ee Tim Conrad, FSX Qaabka afka hooyo ee LLS, Waxaa isku soo aruuriyey oo tafatiriyey Chris Evans, oo ay ku daabaceen Ken Glazer
Rockwell OV-10D Bronco ee midabada ciidamada badda Mareykanka (USMC) iyo Ciidanka Cirka rayidka ah (CAP: kaaliyaha rayidka ah ee Ciidamada Cirka Mareykanka). Moodeelka loo yaqaan '3D' waxaa loo beddelay mid u dhashay FSX Qaababka LLS. Prepar3D v4 la jaan qaada, waxaa ka mid ah dhawaqyada caadada ah, dareenka sare, muuqaallada, cabbiraadaha caadada ah. Waad ku mahadsan tahay Chris Evans shaashadda.
Ku saabsan diyaaradda dhabta ah
Bronco OV-10 waa saldhig ciidan oo dabacsan, baaritaan iyo diyaarado hagid ah oo ay soo diyaarisay North American. Waxa uu ku lug lahaa, waxyaabo kale, Dagaalkii Vietnam iyo dagaalka lagula kacay tahriibiyeyaasha daroogada ee Colombia ilaa 2015. Nooca OV-10D waxaa loogu talagalay US Marine Corps oo ah doorka habeenkii daawashada.
OV-10D waxay ku qalabeeysataa tamarta korontada ka dhalatay, muraayadaha dusha sare leh oo qaadi kara dambiilaha roodhida leh, cirifka, boobka bilaashka ah ama baaskiilada lagu hagayo, iyo taangiyada dibadda. A FLIR AN / AAS-37 oo ay dhistay Texas Instruments iyo laser-designer ayaa lagu rakibay turret ku yaal sanka ee diyaaradda. Tani waxay ku xiran tahay General Electric M97 20 qalabka muraayada lagu rakibay qoryaha hoostiisa hoostiisa halkii uu ka noqon lahaa fiilooyinka OV-10A. Qalabka waxaa ku xiran nidaamka raadinta iyo digniinta radar-ka ee APR-39, ALE-39 decoy-furayaasha iyo nidaamka dhimista gaasta kuleylka ah. (Source source).
Qore: Qaabka asalka ah ee Tim Conrad, FSX Qaabka afka hooyo ee LLS, Waxaa isku soo aruuriyey oo tafatiriyey Chris Evans, oo ay ku daabaceen Ken Glazer